सबैभन्दा अन्यायमा परेको त म पो : एआइजी जयबहादुर चन्द :: PahiloPost
सबैभन्दा अन्यायमा परेको त म पो : एआइजी जयबहादुर चन्द
३० वर्षीय सेवा अवधिका कारण एआइजी जयबहादुर चन्द बुधबार मध्यरातबाट अवकास पाउँदैछन्। पोहोर फागुन १ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीमा बढुवा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर केही घण्टामै सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो, पछि निर्णय नै बदर गर्ने फैसला आयो। कस्तो रह्यो त एआइजी चन्दको ३० वर्षीय कार्यकाल? पहिलोपोस्टका सविन ढकालले गरेको संक्षिप्त कुराकानी
तपाईंको ३० वर्षीय प्रहरी सेवा कस्तो रह्यो त?
एकदमै सुखी जीवन बिताइयो। देश र जनताको सेवा गर्न पाइयो। सबैको माया पाइयो। फलदायी नै बित्यो। जीवनमा केही दुःखका दिनहरु पनि आए। पद्दति र राजनीतिका कारण केही दुःख पनि सहनु पर्‍यो।
दुःखका दिन भन्नुभयो। आइजी भइसकेर अदालतले बदर गरिदिएको भन्न खोज्नुभएको हो?
हो। त्यो पनि मेरो दुःखका दिन नै थिए। ममाथि अन्याय भएको थियो। सबैभन्दा अन्यायमा परेको त म पो थिएँ। युग-युगसम्म सम्झिने दु:खका दिन हुन्।
कसरी अन्यायमा पर्नुभयो?
हिजो जो मानिस ३ नम्बर ४ नम्बरमा रहेकालाई आइजी बनाउनु हुँदैन भन्थे, आज तिनै मानिस २ र ३ नम्बरकालाई बनाउन लागेको देखियो। दोहोरो चरित्र देखाएका छन्। त्यतिबेला नहुने, अहिले हुने भन्ने हुन्छ? प्रहरी नियामवलीमा कहीँ पनि २, ३ वा ४ नम्बरको मान्छे आइजी हुन नपाउने भन्ने नै छैन।
राजीनामा दिने चलन नै चलेको छ। तपाईँलाई त्यतिखेर राजिनामा दिउँ भन्ने लागेन?
पदमात्र सेवा होइन। पद बाहिर पनि सेवा गर्न सकिन्छ। आइजी नभएपनि सेवा गर्नसक्छु भन्ने लागेर राजीनामा दिने सोच आएन। काम पूजा हो। मैले सम्मान गरेँ।
यो राजीनामालाई के भन्नुहुन्छ त?
कसैको व्यक्तिगत कुरा गर्न चाहन्नँ। तर आफू पदमा भइनँ भन्दैमा राजीनामा दिनु गलत हो।
संगठनभित्र राजनीति चाहीँ कतिको हुँदो रहेछ?
राजनीति नहुने कुनै ठाँउ हुँदैन। त्यसको मात्रा मात्र कति भन्ने हो।
बाँकी जीवन के गरेर बिताउनुहुन्छ त ?
बाँकी जीवन कुनै संघसंस्थामा आवद्ध भएर बिताउँछु। कतै मिडियातिर आवद्ध हुने सल्लाहहरु पनि आइरहेका छन्। सोच्दैछु।
सबैभन्दा अन्यायमा परेको त म पो : एआइजी जयबहादुर चन्द को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।